Spotify Free User တွေလည်း ကြော်ငြာတွေကို Skip လုပ်လို့ရတော့မှာလား?
12 Aug 2018 . 3:14 PM
Music Streaming Application တွေထဲမှာ Spotify နဲ့ Apple Music က လက်ရှိမှာ အသုံးပြုမှုအများဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့ Spotify တစ်ခုထဲကပဲ Subscribed ပြုလုပ်စရာမလိုအပ်ဘဲ အသုံးပြုနိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် လစဉ်ကြေးမပေးဘဲ အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Spotify က အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး အခမဲ့နားထောင်တာနိုင်တာက အသုံးပြုသူတွေဘက်မှာ ကျော်လို့မရတဲ့ ကြော်ငြာတွေနဲ့ Offline နားထောင်လို့မရတဲ့ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကြော်ငြာတွေ ကြားဖြတ်လာတာကို မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Premium Subscription ကို ဝယ်ယူတာပိုပြီး အဆင်ပြေနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ Spotify က Australia မှာ Free User တွေကို လက်ရှိကြော်ငြာတွေကို မကြိုက်ရင် ကျော်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ Feature တစ်ခုကို စမ်းသပ်နေပြီးတော့ အဆိုပါ Feature အရ Audio ကြော်ငြာတင်မကဘဲ Video ကြော်ငြာတွေကိုပါ ကျော်နိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Spotify ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ လက်ရှိ Free User တွေမှာ ကြော်ငြာတွေကို မြင်နေရဦးမှာဖြစ်ပေမယ့် မကြိုက်တဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ကျော်သွားနိုင်အောင် ယခု Feature ကို စမ်းသပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် Spotify ကို အခမဲ့အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအတွက် ကြော်ငြာတွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာ သိသိသာသာလျော့ကျသွားနိုင်ပြီးတော့ မကြာခင်မှာ ယခု Feature ကို တကမ္ဘာလုံးက အသုံးပြုသူတွေအားလုံးရရှိလာဖို့ ရှိနေတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Music Streaming Application တှထေဲမှာ Spotify နဲ့ Apple Music က လကျရှိမှာ အသုံးပွုမှုအမြားဆုံးဖွဈနပွေီးတော့ Spotify တဈခုထဲကပဲ Subscribed ပွုလုပျစရာမလိုအပျဘဲ အသုံးပွုနိုငျနတောဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ လစဉျကွေးမပေးဘဲ အသုံးပွုခငျြတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ Spotify က အကောငျးဆုံးရှေးခယျြစရာတဈခုဖွဈနပေါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုလိုမြိုး အခမဲ့နားထောငျတာနိုငျတာက အသုံးပွုသူတှဘေကျမှာ ကြျောလို့မရတဲ့ ကွျောငွာတှနေဲ့ Offline နားထောငျလို့မရတဲ့ အားနညျးခကျြတှေ ရှိနပွေနျပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ကွျောငွာတှေ ကွားဖွတျလာတာကို မကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ Premium Subscription ကို ဝယျယူတာပိုပွီး အဆငျပွနေတောဖွဈပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာတော့ Spotify က Australia မှာ Free User တှကေို လကျရှိကွျောငွာတှကေို မကွိုကျရငျ ကြျောနိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ Feature တဈခုကို စမျးသပျနပွေီးတော့ အဆိုပါ Feature အရ Audio ကွျောငွာတငျမကဘဲ Video ကွျောငွာတှကေိုပါ ကြျောနိုငျနတောဖွဈပါတယျ။ Spotify ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ လကျရှိ Free User တှမှော ကွျောငွာတှကေို မွငျနရေဦးမှာဖွဈပမေယျ့ မကွိုကျတဲ့ ကွျောငွာတှကေို ကြျောသှားနိုငျအောငျ ယခု Feature ကို စမျးသပျနတောဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ Spotify ကို အခမဲ့အသုံးပွုနတေဲ့သူတှအေတှကျ ကွျောငွာတှကွေောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈရတာ သိသိသာသာလြော့ကသြှားနိုငျပွီးတော့ မကွာခငျမှာ ယခု Feature ကို တကမ်ဘာလုံးက အသုံးပွုသူတှအေားလုံးရရှိလာဖို့ ရှိနတေယျလို့ ယူဆရပါတယျ။